शिर्षक - नेपाली जनतालाई चुनाबको चिठी
नंया दैनिकी मंगलबार, चैत २९, २०७८
झन्डै तीन करोड़ नेपाली जनतालाई खाडी मुलुक, जापान, अमेरिका कोरिया अनि विश्वको हरकुना बाट नमस्ते! विभिन्न अवसरको खोजि, अध्ययन अध्यापनको खोजि अनि घरको रोजीरोटी धान्न बाहिरिएका नेपाली जनताको तर्क बाट स्वदेशमै बसेर देशको हरेक परिवर्तनको साक्षी बनेका नेपाली हरुमा हामी परदेशिएका नेपालीको तर्फबाट अग्लो शिखर सगरमाथा देखि गहिरो अरुणउपत्यका सम्म, पुर्ब मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मलाइ सम्झना अनि यो पत्र ।
हामी नेपाली परदेशमा बस्दा विकासका चरमउत्कर्षका विन्दु देखि विदेशीको जीवन र जीवनयापन देखि परिचित छौं । बाहिर निस्किएर सडकमा मोटर हाक्दा होस्, या टहलिदै बाटो चाहार्दा होस्, बाटोको संरचना देख्दा मन हुरुकई भएर आउछ । यहाका सार्वजनिक शौचालय हरु प्रयोग गर्दा त्यहाँको सरसफाई होस् वा खाना खान जादा होटलको संरचना देख्दा होस्, विधालय प्रशासनमा जादाँ त्यहाको बनोट देख्दा होस् । यी सबै कुराको अवलोकनका गर्दा मनको कतैकुनामा अर्को मन बोलिरहेको हुन्छ म जन्मेको ठाउ, हुर्केको देश कहिले यसरि नै अघि बढ्ला भन्ने लाग्छ । जो नेपाली हामी सृजनशील छौ, शारीरिक अभ्यास गर्न सक्षम छौ, देसका थिंक ट्यांक बन्न सक्षम छौं धेरै अहिले बाहिर छौ । हामीहरुले रेमिटान्स पठाउने र केहि समय सिप सिकेर नेपाल जानु सिबाय तत्काल यो लेख्नु भन्दा केहि गर्न सक्दैनौ त्यसैले यो कलमले परिबर्तनको आवाज बोल्दै छ । मेरा नेपाली युवाहरुलाई अग्रजहरुलाइ, बुझक्कड हरुलाई पनि यस्तै लाग्दो हो कि उनीहरु बिदेशमा जादा देखेका विकाशले उहिहरुलाई छुदो हो कि देशमै यसतै बनाउ भन्ने लाग्दो हो कि । हामी नेपाली धेरै सन्तोषी छौं । हामीलाई अरु बिकाश तत्काल गरेर धेरै फेर्नु छैन बस स्वदेशमै बसेर आफ्ना दुइहात जोर्न र दैनिक उपभोगीय बस्तु सहजै उपलब्धताको आवश्यकता छ । यसको लागि हामी जनताले धेरै कुराको खोज अनुसन्धान र धेरै कुराबाट सिक लिएर यो चुनाबमा आफ्नो मत देखाउनु पर्छ । भ्रस्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशीलता बाटो अङ्गिकार गर्नुपर्छ ।
जनता संग भोट माग्न जादा विभिन्न सिद्धान्त र आदर्शका विचार अनि घोषणापत्र देखाउने सत्तामा पुगेपछि लुछाचुँडीको राजनीति गर्ने माननीय ज्यूहरुलाई समयमै चिन्नु जरूरी छ । नेपालका रातनीतिज्ञ भनेको “हात्तीका देखाउने दात एउटा खाने दात अर्को” भने झै हो । भुइँबाट सत्तामा पुग्ने बेला आफ्नो पाटी र कार्यकर्ता बनाउने सत्तामा पुगेपछि पाटि र घोसणापत्र बिहिन हुने किसिमको जुन प्रवृति छ, त्यसको पछाडिको लोजिक बुझ्नुपर्छ । यसको सोझै अर्थ के हो भने यदि कसैसंग स्वार्थ मिल्यो भने उनीहरुले आफ्नो बाटो भूल्न हिच्किचाउदैन्न वा यसो भन्दा झन् उपयुक्त ठहरिन सक्छ “हिड्दै छ पाइला मेट्दै छ “ यसरि आफ्नो पहिचान भुल्नेहरुलाई कसिंगर जस्तै यो चुनाबको हावाले उडाउनु पर्छ । हामीले आफ्नो पाटी रोजनूको कारण भनेको त्यो पटिकों सिद्धानंतलाई र अग्रपंक्तिमा रहेका नेतृत्व रोजनू भन्नु हो । तर हाम्रोमा के हुन्छ भने सबै पाटी मिलेर गढ़बन्दन गर्ने अनि चुनाब गर्ने अनि सबै मिलेर देश चलाउने । स्वार्थ मिलेन भने गठबन्धन तोड्ने आआफ्नो बाटोमा फर्किने “कही नभएको जात्रा हाडिगाऊमा “ । अबको चुनाबमा नेपाली जनताले गढ़नबंद गरेर आउने जूनसुकै पाटीलाई हराउनु जरूरी छ । विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्न स्थिर सरकारको खाचोपर्छ । त्यसको लागि नेपाली जनताले कन्जुस्याइँ नगरिकन एउटा मात्र पाटीलाई बहुमत दिने हो भने धेरै समस्याको हल यसै हुन् सक्छ । अज अर्को लाइनमा भन्दा हामी नेपाली जनता “जनता ज्यादा पाटीको कार्यकर्ता कम “ भएर चिन्तन र त्यसै अनुरुप व्यबहार गर्न सक्ने हो भने आदा समस्याको हल त नगरिकन आफै सुध्रिन सक्छ । बिगतमा गठबन्धन गरेर जाने पाटीले देशलाई दुर्घटना गराउन सक्छन भन्ने कुरा हामीले अहिलेको पाच वर्षमा भोगी सकेका छौ । तसर्थ नेपाली जनताले आफ्नो मान्छे, म जन्मदै यसैपाटिमा जन्मेको थे, मेरा हजूरबुवा, हजुरआमा, बुवा वा छिमेकी यसै पाटीमा भएकोले यो पाटिमा लागेको भन्दा पनि मैले यसलाई जिताए भने तत्लाघरे माइलाले खेतीको लागि पानी ल्याउन सक्छ, माथिल्ला घरे सान्दाइ देश छोडेर परदेश जानु पर्दैन, घरापरिको ठुल्दिदी गर्भवती हुदा सदरमुकाम वा राजधानी जानु पर्दैन, पढ्नको लागि गाउ छोड्नु पर्दैन, सस्तोमा र छात्रवृत्तिको लागी पढ्न बाहिर जानु पर्दैन, देशमा भएका बाझा जमिनाहरुलाई उब्जनी हुने जमिनको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, छाउपडी बालबिबाह अनि जातिबाटलाइ हटाउन सकिन्छ, विकासका पूर्वाधार खडा गर्न सकिन्छ , देशलाई दोहोरोअंकको आर्थिक क्रांतितिर लैजान सकिन्छ, कृशिमा क्रांति गर्न सकिन्छ, नेपाम संग गरिएका असमान संधिहरु खारेज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बड़ी जोड़ दिएर आफ्नो उम्मेदवार छानी मतदान गर्नु आजको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता हो ।
विश्व राजनीति इतिहास पल्टाउने हो भने अस्स्तु, प्लेटो, अब्राहम लिंकन वा कार्लमाक्सका राजनीतिक विचार आफ्नो समयमा वा समय भन्दा अघि मानब जातिको लागि थिए, नेपालको राजनीतिक इतिहास पल्टाउने हो भने नेपालमा पनि बिपी कोइराला वा मदन भण्डारीका आफ्नै किसिमका बिचार दिएका थिए । सबै कसै न कसैको बिचार संग प्रभावित थिए यो प्राकृतिक प्रक्रिया पनि हो । यदपि नेपालमा नेपालीको आफ्नै किसिमको मौलिक विचार भन्ने छैन कटु शब्दमा भन्दा सबैखाले बिचारहरु आयातित बिचारहरु नै हुन् । हामी नेपालीको अर्को दुर्भाग्य भनेको चाहिँ नेपाल एकिकरण गर्ने राष्ट्रपिताको संमान गर्न र मार्गदर्शन लाइ पछ्याउन पछाडी पर्यौ । यसको पछाडी आआफ्नो किसिमका स्वार्थहरु स्पट रुपमा देखिदै आएका छन् । विदेशी निकाय संग बिक्नु, बिदेशीको गुणगान गाउदा आफूलाई महान ठान्नु पनि हाम्रो कमजोरीको रुपमा प्रकट भएको पाउन सकिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल दुइ ढुङ्गा बिचको तरुल भन्नु भएको थियो । युगले काचुली फेरे संगै संसारले नि आआफ्नो स्वरूप र परिस्थिति बदलेको छ । नेपालको पुर्ब, पश्चिम दक्षिणमा विश्वको दोस्रो ठुलो जनसंख्या र उत्तरमा विश्वको पहिलो जनसंख्या रहेको छ । यहि जनसंख्या लाइ केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपालमा उत्कृस्ट विश्वविद्यालय र अनुसन्धानको हबको रुपमा नेपाललाई विकास गर्न सक्ने हो भने पनि नेपालको नक्सा विश्व मानचित्रमा फरक खाले छाप दिने खाले बनाउन सकिन्छ । नेपालको पानी बाट बिजुली र नेपालको पानी बेच्नलाई बाहिर पठाउन सक्ने हो भने पनि नेपालमा फरक किसिमको परिबर्तन गर्न सकिन्छ । नेपालले आफ्नो सास्कृति पहिचान र पर्यटनको क्षेत्र चिनाउन नेपाल सरकारले काम गर्न सक्ने हो भने पनि नेपाल दश वर्षमा धेरै अघि पुग्न सक्छ । हाम्रो देशमा भिजन नभएको कोहि छैन तर नेतृत्व पंतिमा रास्ट्र प्रति जुन किसिमको पवित्रता हुनुपर्ने हो त्यो नभएकाले देश अध्यारो बाटोतर्फ उन्मुख हुदै गएको छ, यसलाई यूटन मोडेर सहि ट्रयाकमा ल्याउनु । यो चुनाबको विशेष काम भएकाले नेपाली जनताले सोविबेक प्रयोगगरी मत राख्नु हुन् सम्पूर्ण परदेशिएका नेपालीको अनुरोध छ । नेपालमा नेपालीको आफ्नो मौलिक र आफ्नै किसिमको सोच बनाउनु यसको जग बसाउनु पनि आजको आवश्कता हो । यसको लागि नेपाली जनता नेताहरुलाई दोष लगाई राख्नमा समय ब्यतित गर्नु भन्दा पनि सुझाब र मन नपरे लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बाट निकाल्न पछाडी पर्नु हुदैन । एउटा भनाइ छ नि “देशले आफ्नो हैसियत अनुसारको नेता पाउछ” यसमा विरोधाभाष पनि छ तर यसलाई बिल्कुलै नकार्न भने सकिदैन अबको चुनाबमा नेपाली जनताले आफ्नो हैसियत के भन्ने पनि देखाउनु पर्छ । सबै नेपाली जनताको मत बोल्ने किसिमको मतदान गर्नु पर्छ । आजलाई यति लेख्दै अर्को चिठी भने आउने चुनाबमा लेख्ने छौ । धन्यवाद !
उहिँ तपाईका परदेशिएका नेपालीहरु
भरत खत्री "सान्दाइ" दक्षिण कोरिया
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २९, २०७८, २०:३७:००